အာရှတလွှား | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 156
ကိုယ်စိတ် မချမ်းသာရခြင်း အကြောင်း … Kama Pale
ကိုယ်စိတ် မချမ်းသာရခြင်း အကြောင်း … (ကမာပုလဲ) ကျနော်တို့ အမိနိုင်ငံ ဗမာပြည်မှာပေါ့ဗျာ …။ ကျနော်တို့ငယ်ငယ် အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝ အရှော့တ် ဟစ်စရီအော့ဖ် ဘားမား (A Short History Of Burma) (ဗမာပြည်သမိုင်း အကျဉ်းတိုတို) ကို အင်္ဂလိပ် သင်္ခန်းစာမှာ ပြဌာန်း သင်ယူခဲ့ဖူးတယ် …။ တရုတ်ပြည်က ဆင်းလာတယ် ပြောပြော အိန္ဒိယကနေ နွယ်လာတယ် ဆိုဆို တိဘက်တို ဘားမိစ်လား မွန် ခမာလား ဘာလား ညာလား ထားပါတော့လေ …။ ဟိုး တလောလေးဆီက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခ အတော့်ကို ကြေကွဲစရာပါပဲ … ရှေ့ရေးကို မတွေးရဲအောင် ထိတ်လန့်ခဲ့တယ် …။...
ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးခြင်းဆိုသည်မှာ တူမောင်ညို ။ ဇူလိုင် ၉၊ ၂၀၁၂ “ပြည်ထောင်စု” ဟူသောမြန်မာဘာသာစကားလုံးတွင် တူညီကြသော် အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့် ကိုင်စွဲကြသည့် အနှစ်သာရအပိုင်း သဘောတရားရေးအပိုင်းတွင်မူ ပြက်ပြက်ထင်ထင်ကွဲလွဲနေကြပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလုံးတွင် အုပ်စိုးသူများဘက်က (Union) ဟူသောစကားလုံးကို သုံး၍ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများဘက်က (Federal)ဟု တစ်သမတ်တည်းသုံးစွဲခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မေလ ၃ ရက် တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၊ အမိန့်အမှတ် ( ၁၂/၂၀၁၂) ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း ဆိုသည့် ကြေညာချက်တွင် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီ၏ တာဝန်များအဖြစ် အောက်ပါအတိုင်း (က) နှင့် (ခ) ဟူ၍ ၂ပိုင်းခွဲပြီး ဖေါ်ပြထားပါသည်။ (က) ပြည်နယ်အဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးခြင်း (ခ) ပြည်ထောင်စုအဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးခြင်း...
Kama Pale – မျှော်မနေတော့တဲ့ … ကိစ္စ
မျှော်မနေတော့တဲ့ … ကိစ္စ ကမာပုလဲ၊ ဇူလိုင် ၉၊ ၂၀၁၂ ခုတလော ဟိုတုန်းကလို အမေရိကန် မရိန်းတပ်ကြီးကို မမျှော်တော့ဘူး …။ အာရှ ပစိဖိတ်ဒေသကို အမေရိကန်ရေတပ်ကြီး လာနေတယ် ဒီတော့ လက်ယပ်ခေါ် မျှော်နေဖို့ မလိုတော့ဘူးပေါ့ …။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတွေမှာပဲ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ အမေရိကန် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု လုပ်တယ် ရန်သူ့ ပစ်မှတ်တွေကို ဒုံးလက်နက်တွေနဲ့ ပစ်တယ် ဒါ … ဆန်းတဲ့ကိစ္စမှ မဟုတ်တာ ပြုနေကျ ကိစ္စပဲ အဲ … တခုထူးခြားတာက သူတို့ရဲ့ ပစ်မှတ်ဟာ မြောက်ကိုရီးယား အလံ ဖြစ်နေတာပဲ …။ မီးမွှေးတာလား ရန်စတာလား ဒါ … သူတို့ကိစ္စ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီက...
“ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး” တကယ်ရနိုင်သလား တူမောင်ညို ။ ဇူလိုင်လ ၈၊ ၂၀၁၂ (NLD) ပါတီကိုကြည့်ပါ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈) လက်ခံလိုက်တာနဲ့ ပါတီမှတ်ပုံတင်နိုင်တယ်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်နိုင်တယ်၊ “လေးစားလိုက်နာ”နဲ့ “ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်” ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေမှာကို ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါတဲ့အတိုင်း လက်ခံပြီး အလွယ်တကူဖြတ်ကျော်သွားခဲ့တာပဲမဟုတ်လား။ “ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး” ရရှိနိုင်ဖို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်တဲ့ ကြံ့ဖွံ့အစိုးရက အဆင့် ၃ ဆင့်နဲ့ဆောင်ရွက်မယ်လို့ တရားဝင်ပြောကြားထားတယ်။ – တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အဆင့် – ပြည်ထောင်စုအဆင့် – ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်အဆင့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ဗဟိုကော်မတီ နဲ့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ တွေလည်းဖွဲ့စည်းပေးထားတယ်။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အဆင့်မှာ လုပ်ငန်းတာဝန် (၅) ရပ်နဲ့...
TU MAUNG NYO – ဒုတိယသမ္မတ ဘယ်သူဖြစ်လာမလဲ
ဒုတိယသမ္မတ ဘယ်သူဖြစ်လာမလဲ တူမောင်ညို၊ ဇူလိုင် ၅၊ ၂၀၁၂ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၆၀ (ခ) (၃) အရ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ “စစ်သားအမတ်” (၂၅%) က အမည်စာရင်းတင်သွင်း ပေးရမှာဘဲ။ ဒါကြောင့် (၂၅%) စစ်သားအမတ်တွေက အမည်စာရင်းပေးတာမျိုးတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ရွေးချယ် စေလွှတ်သူကိုသာ စစ်သားအမတ် (၂၅%) က လက်ခံပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုရတာပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက်က ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟာ ဒုတိယသမ္မတတစ်ဦးကို ရွေးချယ်နိုင်တယ်၊ စေလွှတ်နိုင်တယ်၊ အမည်စာရင်းပေးနိုင် တဲ့ အာဏာရှိနေတဲ့ အချက်ကို သိသာ ထင်ရှားစေပါတယ်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟာစစ်သားအမတ် (၂၅%) ကို စိတ်ကြိုက်စာရင်း ပေးနိုင်သလို၊ ပေးထားတဲ့ စစ်သား အမတ်တွေကိုလည်း စိတ်ကြိုက်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်ပြီး၊ အစားထိုးပေးနိုင်ခွင့်လည်းရှိတယ်။ ချုပ်လိုက်ရင်...
တူမောင်ညို ဇွန် ၁၈၊ ၂၀၁၂ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်မှုများအပေါ်မူတည်ပြီး ထင်မြင်ယူဆချက်မျိုးစုံ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုနေကြသော်လည်း ဦး သိန်းစိန်အစိုးရက သူတို့သဘောထားနဲ့အမြင်ကို တိတိကျကျ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ သို့သော်လည်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကတော့ အခုလို ခြေဆင်းပျိုးထားပါပြီ။ “ …. ယခုလတ်တလောဖြစ်ပွားနေသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်စဉ်များသည် ရှုပ်ထွေးနက်နဲသော နောက်ခံအကြောင်းအရာများကို အ ခြေခံပြီး ဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ….” “ရှုပ်ထွေးနက်နဲသော နောက်ခံအကြောင်းအရာများ” ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီက “ရှုပ်ထွေးနက်နဲသော နောက်ခံအကြောင်းအရာများ” ကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှာလား။ “ရှုပ်ထွေးနက်နဲသော နောက်ခံအကြောင်းအရာများ” ဆိုတာ ဗြိတိသျှကိုလိုနီအမွေဆိုးလား။ ကိုလိုနီဆိုးမွေကို ဆက်ခံခဲ့ကြတဲ့(ဖဆပလ)၊ (မဆလ)၊ (နဝတ-နအဖ)အုပ်စိုးသူအစိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့မှားယွင်းတဲ့မူ၊ ပေါ်လစီနဲ့ ညံ့ဖျင်းတဲ့ အုပ်ချုပ်စီမံကွပ်ကဲမှုတွေလား။ (ဖဆပလ) (မဆလ) (နဝတ-နအဖ) အုပ်စိုးသူ အစိုးရအဆက်က (မဲရရေးအတွက်) အမြင်တိုတိုဆောင်ရွက် ခဲ့သည်များကို...
တူမောင်ညို ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၂ ရန်ကုန်မြို့။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၉ ရက်နေ့၊ စနေနေ့၊ နံနက် ၁၀ နာရီ ဝန်းကျင်ခန့်။ တဖွဲဖွဲရွာသွန်းနေသော မိုးရေစက်များကို တရှိန်ထိုးဖောက်ထွင်းမောင်းနှင်နေသော စစ်ဂျစ်ကားတစီး။ ဗြိတိသျှ အမှတ် (၁၂) တံဆိပ်တပ်ဆင်းထားသည့် စစ်ယူနီဖောင်းဝတ် ဂျစ်ကားမောင်းသူ၏ တင်းမာခက်ထန်လှသော မျက်နှာပေး၊ “အစိမ်း တိုက်ခံထားရသူ” ပမာ အေးစက်စက်မာကျောကျော မျက်လုံးအစုံနှင့်သူ၏လက်သည် စတီရာရင်ဘီးကို ကျင်လည်စွာရွေ့လျားနေလျက်။ ဂျစ်ကားမောင်းသူ၏ နံဘေးထိုင်ခုံတွင်လိုက်ပါလာသူ စစ်ယူနီဖောင်းဝတ်၏ပခုံးပေါ်နှင့် လက်မောင်းပေါ်မှာ ရာထူး အဆင့် တံဆိပ်များ၊ ထိုမှ တဆင့် ထိုသူ၏ ရက်စက်မှုပုန်းခိုနေသောမျက်လုံးများ၊ ထိုသူ၏လက်ထဲတွင်းကိုင်ဆောင်ထားသော အသစ်စက်စက် တော်မီဂန်း စက်သေ နတ်၏ ပြာလဲ့အေးစက်နေသည့်သံမဏိရောင်နှင့် ခလုပ်ကွင်းပေါ်တွင် ကန့်လန်ဖြတ်လျှက် ပစ်ခတ်ရန်အသင့်တင်ထားသည့်လက်ညှိုး။...
ကိုကိုအောင် မှန်မှန်ပြော တူမောင်ညို၊ ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၂ “ကိုကိုအောင်” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးရှင်က ပြည်ပခရီးထွက်တော့မယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို (Burma/Myanmar) ဆိုတဲ့ စကားလုံးမှန်မှန်ကန်ကန် သုံးစွဲဖို့ သတိပေးချင်တာနဲ့တူပါတယ်။ သတင်းစာတွေထဲမယ် “အမှိုက်ကစ ပြဿဒ်မီးလောင်” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးရေးလာပါတယ်။ သမိုင်းကြောင်းတွေ၊ ဥပဒေပုဒ်မတွေကို ကိုးကားပြီး မိုးလားကဲလားရေးထားတယ်။ သမိုင်းဘက်ကဆိုရင် အနော်ရထာ၊ ဘုရင့် နောင်၊ အလောင်းဘုရား အထိ ကိုးကားထားတယ်။ ဥပဒေဘက်ကဆိုပြန်ရင်လည်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၁၉၄၇)၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ (၁၉၇၄)၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈) ထဲက ပုဒ်မတွေအထိ သာဓကတင်ပြထားတယ်။ သမိုင်းကြောင်း သမိုင်းကြောင်းတွေ ကိုးကားရာမှာလည်း လိုရာဆွဲကိုးကားသွားတယ်။ “အနော်ရထာ၊ ဘုရင့်နောင်၊ အလောင်းဘုရား” တို့ ခေတ်...
တူမောင်ညို ။ ဇွန် ၁၁၊ ၂၀၁၂ အမှိုက်ကစ ပြဿဒ်မီးလောင်ပြီ။ တကယ်တော့ ပြဿနာရဲ့မူလဇစ်မြစ်က “အဓမ္မကျင့်၊ လူသတ်၊ ပစ္စည်းလု”တဲ့ ရာဇဝတ်မှုသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို သက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်း (မြို့နယ် အဆင့်)က စနစ်တကျ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စပါ။ ဒါပေမယ့် မြို့နယ်အဆင့်ကလည်း ဒီကိစ္စကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ ကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းမရှိခဲ့တဲ့အပြင် ဆက်လက်ပြီးတော့ အပြစ်မဲ့သူလူ (၁၀) ဦး သတ်ဖြတ်မှု ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ ဘယ်မှာလဲ ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဘယ်မှာလဲ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု။ ဒီလိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်တွေကို နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ၊ ရုပ်မြင်သံကြား နှင့် ရေဒီယို (FM ရေဒီယိုကွန်ယက်များ) များကနေ မီးလောင်ရာ လေပင့်တဲ့ အရေးအသားအသုံးအနှုန်းများနဲ့ ကြွလာ၊ ထလာအောင် ရေးသားထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့အရေးပေါ် မိန့်ခွန်းထဲမှာထည့်ပြောသွားတဲ့ “...
Page 156 of 156«1...152153154155156